LMDE Update Pack 4 sy ny solony amin'ny Gnome 2 | Avy amin'ny Linux
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | fampiharana, Fitsinjarana, GNU / Linux
Eo ambanin'ity lohateny ity amin'ny Bilaogy LinuxMint, Clem dia namoaka lahatsoratra manazava fa hihaona amin'ny nandrasana hatry ny ela isika Fanavaozana faha-4 de LMDE.
Ity fanavaozana ity, izay ao amin'ny dingana fanandramana sy fanomanana, dia misy ireto fanovana manaraka ireto:
MATE 1.2 (miaraka amin'ny mintMenu sy mintDesktop mivoaka tanteraka amin'ny MATE)
Ho an'ireo mpampiasa te-hitahiry fonosana avy ao amin'ny Fanavaozana Pack 3, izany hoe tazomy ny gnome 2, azonao ampiasaina ireto repositories ireto:
Na izany aza, na dia mbola tsy fantatra aza izay ho be mpitia eo kanelina y VADIKO, Ity safidy faharoa ity dia mety ho safidy mahomby ho an'ny mpampiasa ny gnome 2, na dia mahita aza mety ho toa inona ny Gnome Fallback, ho ahy VADIKO mihemotra io.
Ho fanampiny, Clem dia mampahafantatra antsika fa ny ISOs de LMDE miaraka amin'ny Fanavaozana Pack 4, dia manasongadina izany koa VADIKO y kanelina Mety tsy izy ireo ny solosaina finday misy anao, fa ho tafiditra ao ihany anefa, ary samy hifanaraka tanteraka. Manavao koa izy ireo Firefox y Thunderbird amin'ny kinova 11.0. Ka fantatrareo ry zalahy, hanana vaovao momba izany izahay ato ho ato.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » LMDE Update Pack 4 sy ny safidy Gnome 2
Nohavaoziko ny lmde nataoko mba hamonosana 4 andro vitsivitsy lasa izay, 700 ary fanavaozana megabytes maro sy mihoatra ny antsasak'adiny ny fametrahana no nahatonga ny rafitra somary miadana, na amin'ny fanombohana na amin'ny ankapobeny, tsy fantatro raha ny hadisoako na ny inona, fa ny mandalo avy amin'ny gnome2 ka hatramin'ny 3 ny fiovana dia mahery vaika, ny ratsy indrindra, noho izany dia noterena hametraka kanelina aho izay tsy dia ratsy loatra, fa raha ny marina, very be ny fanovana, tsy mitovy ny safidiny fandaminana, ankoatry ny zavatra hafa. , ka mieritreritra aho fa hanova ny distro, ho fanontaniana misokatra, manao ahoana ny chakra amin'ny endriny farany? Tiako i kde ary mivantana dia toy ny bala, napetraka tsy haiko, miandry ny valinteninao aho, arahaba.
ps: tsara indrindra ny bilaoginao, iray amin'ireo zavatra tsara indrindra hitako, amin'izao fotoana izao ary miaraka amina angona manan-danja ho an'ireo mpampiasa linux, arahabaona
Chakra dia safidy tena tsara.
Ary amin'ny fahombiazan'ny ankapobeny?, Hanana olana aho ohatra rehefa mametraka firefox satria amin'ny bundle, hoy aho, ny fikirakirana voatahiry ao .home dia tazonina, fanontaniana iray hafa, azoko atao ny mametraka synaps ary miasa izy io, tsy hitako izy ireo tamin'ny bundle manager na amin'ny installer programa amin'ny maody mivantana
Nampiasa Chakra aho nandritra ny 6 volana, tamin'ny taon-dasa, ary tena faly tamin'izany aho. Azonao atao ny mametraka Firefox tsy misy olana, avy amin'ireo fonosana, izay fonosana feno fampiharana GTK izay "tsy mandoto ny rafitra amin'ny fiankinan-doha aminy", ary koa avy amin'ireo tobim-piarahamonina CCR. Avy amin'ny synaps tsy misy hevitra, fa Opera dia tonga amin'ny toerany ofisialy. Raha tianao ny KDE, tohizo.
Hadinoko, ny configurations dia voatahiry ara-dalàna, na bundle na tsia.
Misaotra tamin'ny fanehoan-kevitra, ampaherezo aho ary nametraka sy nanamboatra chakra linux fotsiny aho, mandeha tsara dia haingana izy io ary tsy misy olana lehibe, arahabaona
Misaotra anao sebas ary tongasoa:
Heveriko fa amin'ity tranga ity dia tsara kokoa ny miandry ny famoahana ny .isos miaraka amin'ny Update Pack 4 hisorohana ireo fanavaozana lehibe ireo.
Misaotra tamin'izay nolazainao momba ny bilaogy, manandrana mampifaly ny rehetra izahay 🙂
PS: Rehefa mahita tsiro ho an'ny KDE ianao dia tsy te hanandrana zavatra hafa 😉
Joseph Gary dia hoy izy:
hehehehe marina Andriamatoa Gaara, mikasika ny KDE !! vaovao mahafinaritra fa ny iray amin'ireo distro tiako indrindra (LMDE) dia miaraka amin'i KDE. Na dia tena hanana ho avy aza ny kanelina.
Valiny tamin'i Joseph Gari
kanelina dia hanana ho avy tsara .. ary antenaina fa hanala ilay tsena amin'ilay hadisoana natiora antsoina hoe "Unity"
toy izany koa .. !! Tsy nanohy nampiasa ny KDE aho satria ny feso dia tsy mampiseho sary famintinana an'ireo horonantsary toa ny nautilus. izany ihany no zavatra tsy tiako momba ny KDE irery ihany ahahaha
Azonao atao ny mampavitrika ireo sary kely amin'ny video ao amin'ny Dolphin amin'ny alàlan'ny fametrahana kdemultimedia-ffmpegthumbs, ohatra, fa ny tena marina dia tokony ho fenitra ankehitriny.
aona tsy fantatro fa O_O… misy fomba azo atao toy ny ao amin'ny Gnome2 miaraka amin'ireo rakitra audio? izany hoe, mametraka ny cursor / pointer amin'ny rakitra audio dia manomboka milalao? misaotra 🙂
KZKG ^ Gaara, raha ny fantatro tsia, na dia tsy namono tena aza aho mba hahitana vaovao momba izany. Ary izany ve ao Dolphin, raha mampavitrika ny tontonana fampahalalana isika dia afaka mijery mialoha ireo rakitra multimedia, na dia tsy mitovy aza izany.
mmm eny marina ny anao, miaraka amin'io tontonana io no anaovana azy, saingy 14 santimetatra fotsiny ny efijery misy ahy ... miaraka amin'ny 1024 × 768 mandany habaka amin'io tontonana io satria mahasosotra 🙁
Mandeha tsara ny Chakra. Avy any Kubuntu aho ary mahatsiaro ho ao an-trano. Momba ny fampisehoana dia tsara be. Mametraha fotony ary avy eo, manomboka mametraka izay tianao. Mikasika ny Firefox dia azonao atao ny mametraka azy avy ao anaty fonosana, izy io dia firefox tsy dia tafiditra loatra, manana safidy hafa izy izay tafiditra ao anaty firefox-qt fa mijery azy io fotsiny ny map x_X ratsy tarehy.
Ny iray hafa dia ny fametrahana avy ao amin'ny ccr ny firefox-kde-opensuse mitambatra tsara tsy vitan'ny maso raha tsy amin'ny zava-drehetra, fa ny olana dia tsy maintsy manangona sy manome fahafaham-po ireo fiankinan-doha gkt + maro izy ary maharitra fotoana maharitra ny fanangonana>. <Nefa tena mitoetra ihany mahafinaritra ny voaozona nn ary bebe kokoa raha apetrakao ny oksizenina KDE. Ity dingana ity dia averina isaky ny kinova vaovao x_X
thegoodgeorge dia hoy izy:
Fanontaniana iray, manana Xubuntu napetraka eo am-pofoako aho izao, ny LMDE miaraka amin'i Xfce dia azo heverina ho distro maivana sy haingana kokoa?
Mamaly an'i elbuengeorge
Maivana kokoa azo antoka. Haingam-pandeha …… ..Mandeha ram amin'ny ondrilahy aho ary manana ny SRWare Iron misy tabilao 6, ny Firefox misy 3, ny terminal, ny thunar ary ny gedit.
Holazaiko aminao ... Manana ny KDE 4.7.4 miaraka amin'ny Chromium misy tab 2 aho, Firefox 11 misy tabilao 1 ary Opera 11.61 misy tabilao 5, miampy mpizara tranonkala (Apache + PHP5 + MySQL) miampy koa Pidgin, KMail, Dolphin (mpitety rakitra) sokafy ary Kate (tonian-dahatsoratra), toy izany koa ny Yakuake (terminal), Klipper, Bluetooth, ary zavatra hafa, ary 750MB RAM fotsiny no laniny O_O ary ny Mint anao dia tsy mihinana afa-tsy amin'ny Xfce sy amin'ny fampiharana 1GB sasany? ... manadala, mandehana _______ izay Mint, isan'andro dia matoky aho fa somary diso tafahoatra ...
Ary ohatrinona ny masininao? Ny ahy dia 4GB.
Ary koa tsy mampiasa zavatra mety "mampihena" ny fampiasana ondrilahy aho
RAM 2GB ihany 🙂
PS: Nepomuk ihany no navaliko… satria mandeha ny vokany, ny mangarahara, ny sarimiaina ary ny Akonadi.
Ahoana no ahatongavana ???
Ary nanandrana nametraka KDE imbetsaka aho (Amin'ny fizarana isan-karazany), fa mavesatra be foana izany.
Manana 3 Ram 2 Core PC, karatra horonantsary Intel aho (Ny tena voafitaka)
Raha manome ahy fampianarana KDE ianao.
1- Ny Intel dia tsy ny karatra farany ambany indrindra, ny mifanohitra amin'izay indrindra.
2- Samy nametraka ny KDE tao amin'ny Debian ny KZKG ^ Gaara, toa ahy (fotoana vitsy lasa izay) tutorial ity.
elav nanao iray actually
Mametraka ny distro amin'ny 32 bit na 64 ve ianao?
Lazaiko aminao, ny KDE dia toy ny AMD ... manana angano maro manodidina azy izy haha ​​🙂
Hahahaha Elav, tsy nilaza an'izany aho. Raha tsy izany dia manana iray amin'ireo intel voahidy indrindra aho. Tsy izany intel izany no voafitaka.
Napetrako tao anaty 32 bit ny KDE (OpenSuse, Fedora, Kubuntu, Arch, Debian, sns)
Tsy mandeha aho ny vokany, Nepomuk. Atsaharo ny milina.
Ny zavatra voalohany tsikaritro:
Mihamangatsiaka ny birao mandritra ny 10-20 segondra ary avy eo afaka manohy aho.
Ny fanjifana ny CPU-ko dia 50% ka hatramin'ny 70% tsy misy mihetsika.
Amin'ny fizarana hafa ny fanjifana dia 20% ka hatramin'ny 40% fa rehefa mamindra antontan-taratasy avy amin'ny DD azo esorina amin'ny pc aho dia miakatra hatramin'ny 100% ny fanjifana amin'ny CPU roa na rehefa manokatra browser Internet.
Tsy izany no tiako hambara. Raha tsy izany dia manana iray amin'ireo intel voahidy indrindra aho. Tsy izany intel izany no voafitaka.
… TPT!!! HAHAHA !!! ny nihomehy ahy tamin'io HAHAHAHA !!!!!
manaitra .. tsy hoe raha ny ambany fanjifana dia noho ny debian mahery na hoe ny tànan'akanjo fitahian'andriamanitra ahahaha xD fa indray mandeha nanandrana nizaha ny KDE niaraka tamin'i Kubuntu aho ary ny fahatsiarovan-tena dia cai 2 gb tamin'ny jdowloader + google fotsiny chrome misy tabilao 5 misokatra sy vlc.
HAHAHA tsia tsy izay mitranga, miaraka amin'ny ArchLinux dia zavatra mitovy amiko no nitranga tamiko (marimarina fa hitako fa haingana kokoa ny KDE tao amin'ny Arch, saingy teo no nampiasako ny KDE 4.8.1 ary tany Debian ihany no 4.7.4, azo antoka fa izany no izy).
Izao dia izao:
- Opera (kiheba 6)
- Firefox (kiheba 1)
- Vokatry ny mangarahara + Sarimiaina
Fanjifana tanteraka: RAM RAM-571MB no lany ary ny SWAP amin'ny 5MB na latsaka.
avy eo dia tokony ho amin'ilay kinova vaovao an'ny KDE izay 4.8 no nohatsaraina ny fanjifana
Vao avy nametraka ny LMDE aho halina, izao dia havaozina indray, antenaiko fa ny zavatra rehetra dia antenaina.
Hatreto aloha, mila mametraka ny mpamily horonan-tsary sy feo fotsiny aho ... sns ... Tsy azoko ny fomba anaovana azy, fa ho hitako izay ataoko, manana ATI 5770 aho, raha hanampy ahy ianao, azafady aza apetraka ny rohy misintona, efa fantatro fa, ny tiako ho fantatra dia ny fizotry ny fametrahana.
Omeo anay ny vokatr'ity:
miaraka amin'ny "Update Pack 4" dia mampatsiahy ahy ny Windows "Service Packs" xDDD
Satria mitovy io. Mitovy amin'ny filazanao fa mahatadidy Windows Update ny mpitantana fanavaozana.
miandry ny UP4 milamina.
Mandeha tsikelikely aho (fa mihazakazaka mankany amin'ny hopitaly aho fa marary be ilay zokiko lahy)
Zavatra efa tsikaritro, ary izany no antony ampiasako ny Xubuntu, dia rehefa vitako ny nametraka ireo programa ampiasaiko indrindra ary mamerina fotsiny mba hanitsiana ny zava-drehetra dia miala ny wifi. Ny carte lap dia broadcom, mandeha ny bokotra, efa napetraka daholo ny mpamily ary arak'ity fiasa ity fa tsy mifandray (ary aorian'ny famerenana na famerenana ireo mpamily, ankoatry ny lany wifi dia tavela aho tsy misy ethernet) Ity olana ity dia mitranga amiko ao amin'ny distro LMDE (izany hoe miaraka amin'ny gnome sy Xfce) ary tsy haiko akory ny mahita ny olana mahazo ahy.
Tsy manadino ireo bandy hafa aho ... Tena te hiara-miasa aho, saingy tsy niantehitra tamin'ny zava-nitranga rehetra manodidina ahy. Ny fihenjanana dia toy ny hoe pffft, tsy afaka manao sary akory aho. Raha vantany vao afaka malalaka sy miala sasatra kely aho, dia misy zavatra mitranga amin'izy ireo, satria tsy manana ilay scanner akory aho ary raha ny tena izy dia tsy afaka namorona na inona na inona avy amin'ny volavolan-kevitry ny fifaninanana. Fialantsiny arivo, tsy sanatria tsy tiako ... Fa avy eo miseho ny raharaha.
Izy ireo dia antony lehibe izay takatra tanteraka.
Onizukar dia hoy izy:
Vaovao tsara inona !!
Misy mahalala ny daty famoahana ireo LMDE ISO miaraka amin'ny Update Pack 4?
Mamaly an'i Onizukar
Salama namana, manana fanontaniana momba ny LMDE aho, apetrako sy havaozina fa miaraka amin'ny Gnome 3 ary tiako ho fantatra raha mbola mahita fotony tokana izy io, satria tao amin'ny Gnome 2 sy Xfce dia CPU tokana no hitany.
Tsy miankina amin'ny tontolon'ny birao izany fa amin'ny kernel ampiasainao. Tokony apetrakao ilay antsoina linux-image-3.2.0-2-686-pae. Manokatra terminal ianao ary mametraka:
Ao amin'ny Grub dia manana aho:
LMDE, miaraka amin'ny 3.2.0-2-486
LMDE, miaraka amin'ny 3.2.0-2-486 (fomba fanarenana)
LMDE, miaraka amin'ny 2.39.0.-2-486
LMDE, miaraka amin'ny 2.39.0.-2-486 (fomba fanarenana)
ary Arch miaraka amin'ny Fallback
Ka tsy izany raha ity pae ity, heveriko fa azonao atao ny mametraka ny pae 686 avy amin'ny Synaptis.
Rehefa mametraka azy voalohany dia angamba napetraka tao anaty fizarazarana ny grub ary rehefa manavao ny Gnome 3 dia apetraho amin'ny gropy hafa ny Grub.
Eny eny, azonao atao ny mametraka azy avy Synaptic. Tsy azoko ny momba ny GRUB: S
Ny mitranga dia ao anaty grub no ananako ireto safidy 4 ireto hisafidianana ny kenel 3.2 sy ilay 2.39 tsy haiko hoe maninona
Satria mbola manana ny kernel avy amin'ny Update Pack 2 😀 ianao
Fa nahoana? raha ao amin'ny loharanom-pahalalana.lisitry ny manana azy toy izao:
deb http://packages.linuxmint.com/ debian main import ankehitriny
deb http://debian.linuxmint.com/latest fitsapana ny contrib lehibe tsy andoavam-bola
deb http://debian.linuxmint.com/latest/security fitsapana / fanavaozana ny contrib lehibe tsy andoavam-bola
deb http://debian.linuxmint.com/latest/multimedia fitsapana ny lehibe tsy andoavam-bola
Nametraka fanavaozana sudo apt-get aho ary fanavaozana sudo apt-get && sudo apt-get dist-upgrade ary manaraka izany ihany koa.
Ampidiro tsara ny linux-image-3.2.0-2-686-pae -yy izao ankoatr'ireo safidy 4 teo aloha dia manana fidirana 2 hafa miaraka amin'ireo ao amin'ny pae 686.
Azafady ny tsy fahalalako fa tsy azoko izay hatao.
Ny hany zavatra ataon'ny GRUB (voalohany) dia avelao hiditra izay Kernel na Operating System. Ny sisa ataonao dia ny miditra amin'ilay voalohany etsy ambony, izay tsy maintsy linux-image-3.2.0-2-686-pae.
Eny fa ireo firaketana efatra hafa izay ataoko miaraka amin'izy ireo, tao anatin'ny iray minitra dia nieritreritra aho fa ho an'ireo fidirana hafa dia afaka miditra miaraka amin'i Mate na kanelina aho.
Raha ny marina dia saika nametraka ny MATE aho tamin'ny session niaraka tamin'ny Grub 2.39, saingy te-hijery voalohany aho, satria tamin'ny haingam-pandeha teo aloha dia namela ireo loza teo amin'ity rafitra ity aho.
Raha toa ka tsy mahavita asa ireo fampidirana ireo dia azo esorina ve?
LMDE, miaraka amin'ny 3.2.0-2-686
LMDE, miaraka amin'ny 3.2.0-2-686 (fomba fanarenana)
Tsy nahatsikaritra aho, fa KZKG ^ Gaara efa ela no nampiasa debian, tsy hiverina any archlinux intsony ve izy?
HAHAHA ianao… naratra izany… LOL !!!
Tsy misy na inona na inona, io Arch io taorian'ny fanavaozana farany 3 dia tsy nifoha, rehefa nanavao kernel iray aho dia tsy natomboka ny rafitra ... ary nandany fotoana be loatra aho tamin'ny fametrahana azy indray, miaraka amin'i Debian eny, manana fonosana TALOHA BE aho, saingy farafaharatsiny afaka mifantoka amin'ny asa aho fa tsy amin'ny fotoana fampiasam-bola. amin'ny OS zavatra.
... fa farafaharatsiny afaka mifantoka amin'ny miasa aho fa tsy mandany fotoana amin'ny zavatra OS.
Ny tena nanakana ahy, ny fotoana natokana ho azy, dia efa nanomboka hanandrana ny andohalambo aho, fa rahampitso dia manana fotoana hizaha asa
Tsy haiko ny nanonona ilay teny.
haha aza manahy fa namboariko 😀
Misaotra anao namela ny fisalasalako mijanona, Mampiahiahy momba ny Rafitra miasa izay alehanao fa tsy ny milelaka aoriana.
Amin'ny tranga hafa, mitadiava ohatra iray hafa mba hidiranao amin'ny zavatry ny hafa
Lehilahy tsy mila manana izany toetra izany ianao. Na izany na tsy izany dia hazavaiko: GRUB dia tsy misy ifandraisany amin'ny fidirana login tadiavinao. Raha hisafidy ny MATE, kanelina na Gnome Shell dia mila misafidy izany amin'ny takelaka fidirana ianao, izany hoe ao amin'ny Session Manager, izay raha ny tokony ho izy dia tokony ho GDM3 ianao.